လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၄ ဇွန်လ အစောပိုင်းက တွေ့ရသော လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့
နာမည်ပြောင်(များ): "Vegas", "Sin City", "City of Lights", "The Gambling Capital of the World", "The Entertainment Capital of the World", "Capital of Second Chances", "The Marriage Capital of the World", "The Silver City", "America's Playground"
လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့ကို နီဗားဒါးပြည်နယ် ကလပ်ကောင်တီ အတွင်း တွေ့ရပုံ
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/US' not found. 36°10′30″N 115°08′11″W﻿ / ﻿36.17500°N 115.13639°W﻿ / 36.17500; -115.13639ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/US' not found. 36°10′30″N 115°08′11″W﻿ / ﻿36.17500°N 115.13639°W﻿ / 36.17500; -115.13639
မေ ၁၅၊ ၁၉၀၅
မတ် ၁၆၊ ၁၉၁၁
၃၅၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၃၅.၈ စတုရန်းမိုင်)
၀.၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (.၀၅ စတုရန်းမိုင်)
၆၁၀ မီတာ (၂၀၀၁ ပေ)
၆၂၃,၇၂၇ (၃၀th, U.S.)
၁၆၅၉.၅/km၂ (၄၂၉၈.၁/sq mi)
၂,၃၆၂,၀၁၅ (US: ၂၇th)
၇၀၂ နှင့် ၇၀၅
လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့ (အင်္ဂလိပ်: Las Vegas) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နီဗားဒါးပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး ကလပ် ကောင်တီ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ဖြစ်သည်။ လောင်းကစားခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင် အကောင်းစားများရှိခြင်း တို့အတွက် ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်းကျော်ကြားသော မြို့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ အပန်းဖြေရေး မြို့တော်ဟု အမည်တွင်သော လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့သည် ကက်စီနို ကစားခြင်းနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အပန်းဖြေမှုများကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ၂၈ ခုမြောက် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် လူဦးရေစာရင်း ဗျူရို၏ စာရင်းဇယား အရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၅၈၃,၇၅၆ ဦး ရှိသည်။ လပ်ဗီးဂပ် မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသတစ်ခုလုံးတွင်မူ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁,၉၅၁,၂၆၉ ဦး ရှိသည်။
↑ Merriam Webster's Geographical Dictionary (3rd ed.)။ Merriam-Webster။ 1997။ p. 633။ ISBN 9780877795469။
↑ "Words and Their Stories: Nicknames for New Orleans and Las Vegas"၊ VOA News၊ March 13, 2010။ January 29, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lovitt၊ Rob (December 15, 2009)။ Will the real Las Vegas please stand up?။ MSNBC။ 20 November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 4, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 Demographic Profile Data (DP-1): Las Vegas city, Nevada။ U.S. Census Bureau, American Factfinder။ March 9, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့&oldid=673928" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။